mairie-antananarivo – Fanadiovana Boriboritany Fahatelo
administrateur 2 aogositra 2018 Commentaires fermés
Mitohy tsy ankiato ny fanadiovana ataon’ny Boriboritany fahatelo eto amin’ny fiadidian’ny kaominina Antananarivo Renivohitra mba ho fitsinjovana amin’ny fahasalaman’ny vahoaka ary ho fampandrosoana ny Tanàna. Androany maraina dia nanatontosa fanadiovana faobe tetsy Ampasampito hatrany Avaradoha ny kaominina notarihan’ ny Sefo Teknika avy etsy amin’ny Boriboritany fahatelo.
Tonga nandray anjara tamin’ny asa fanadiovana teny an-toerana ny Mpamonjy Voina nanala ny lobolobo amin’ny sisin-dalàna, izay mibahana ny lalan’ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara ary manarona ny “Arrêt” sy ny tatatra. Teo koa ny Ekipa avy ao amin’ny boriboritany nisikotra tatatra izay hita fa tena maloto, nohon’ny vokatra naterak’ireo mpivarotra mandefa ny hanimasaka sy ireo olona manary ny malotony isa- maraina (pipi sy kaka) hoy ny tompon’andraikitra teny an-toerana. Marihana fa efa nisy filazana sy fampitandremana ho an’ireo mpivarotra sy ny olona manodidina fa tsy azo anariana maloto amin’ny tatatra nefa mbola tsy miraharaha foana ry zareo.
Teo koa ireo mpamafa lalana amin’ny “Secteur” rehetra avy amin’ny boriboritany niara- nisalahy namafa lalana sy nanala bozaka ary nandroaka ny fako. Tsy diso anjara tamin’izany koa ny Polisy Monisipaly nandamina ny fifamoivoizana teny an-toerana. Mbola hitohy hatrany ny asa fanadiovana ary mbola manentana hatrany ho an’ireo mpivarotra hanimasaka ny kaominina mba tsy hanary izany amin’ny tatatra sy ireo olona manary Pipi sy kaka amin’ny tatatra mba hanangana wc fa hisy fepetra ho raisin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.